Uyenza njani indlela ye-glide kwi-Excel? - Imicrosoft Excel
Eyona > Imicrosoft Excel > Indlela ye-Glide ehamba phambili-iimpendulo kwimibandela
Indlela ye-Glide ehamba phambili-iimpendulo kwimibandela
Uyenza njani indlela ye-glide kwi-Excel?
Itshathi ekujoliswe kuyo kwiI-Excel:
Khetha iseti yedatha iphela.
Yiya Faka ithebhu.
KwiQela leetshathi, cofa kwindawo ethi 'Itshathi yeKholam eHlangeneyo'.
Kwitshathi efakwe kwiphepha lokusebenzela, cofa nakweyiphi na imivalo yeXabiso leThagethi.
Ngemivalo ekujoliswe kuyo ekhethiweyo, cofa ekunene kwaye ukhethe 'Guqula uhlobo lweTshathi yoThotho'.
Wamkelekile! Kule nqaku yokufundisa, siza kubona indlela yokufaka umgca wokugqiba kwitshathi ye-Excel ukwenza ixabiso elijoliswe kuyo libonakale ngokucacileyo kwitshathi. Ukulungele ukuqala? Molo! Kwaye wamkelekile kwi-EasyClick Academy! Igama lam ndinguFrank kwaye sikunye neqela lethu le-EasyClick silapha ukuze siqinisekise ukuba ungasebenzisa i-Excel ngokukhawuleza nangokulula enkosi kwii-tutorials zethu ezilula ukulandela inqaku. Ukuba ufuna ukubonisa ixabiso ekujoliswe kulo kwigrafu, inyathelo lokuqala kukuba Masongeze enye ikholamu ecaleni kwekholamu yokuthengisa kwaye siyinike igama ekujoliswe kulo.
Sikwalungelelanisa ukufomatha kwetafile ukuyenza ihambelane kwaye masiqhubeke. Cofa kwiseli kumqolo wokuqala weThagethi yekholamu Wena kwaye ufake ixabiso, umzekelo 70. Kulunge kakhulu ukuba ukwazi ukutshintsha eli xabiso nangaliphi na ixesha.
Ke siyaqinisekisa ukuba yonke eminye imiqolo ithathe ixabiso ekujoliswe kulo kwiseli. Cofa kwiseli engezantsi, ngu-D4, faka uphawu olulinganayo kwaye ucofe u-D3 kwakhona. Ngoku kufuneka siqiniseke ukuba ulungelelwaniso lweseli alutshintshi xa le fomyula ilula ikhutshelwa kuyo yonke eminye imiqolo.
Cofa kwindawo ebonisa iselferensi yeseli (D3) kwifomula cinezela ukhiye womsebenzi kunye noF4. Abanye bakho abanakudinga ukucofa iqhosha lomsebenzi-kuxhomekeke kuhlobo lwekhibhodi oyisebenzisayo. Ngoku uyabona ukuba ulungelelwaniso lweeseli D3 ziphawulwe ngeempawu zedola, oko kuthetha ukuba ireferensi yeseli izinzisiwe kwifomula kwaye sinokuyikopa ngokutsala kwikona esekunene yeseli kuyo yonke imiqolo kwi ikholamu.
Ixabiso ekujoliswe kulo kumqolo ngamnye ngoku lisoloko likopa ixabiso elifakwe kwiseli D3. Ukuba sitshintsha inani kwi-D3, yithi, 60 kwaye hit Enter, utshintsho lwexabiso luya kubonakala kwikholamu yonke. Oku kusonjululwe ke masiqhubeke ngoku! Kufuneka sibonise ixabiso ekujoliswe kulo njengomgca othe tyaba kwigrafu.
Eyona ndlela ilula yokufumana le datha intsha kwitshathi kukucofa kabini kwindawo yetshathi ukuqaqambisa nayiphi na idatha esele ibonisiwe kwikona yetshathi kwaye ucofe kwaye uhudule indawo ephawuliweyo yetafile ukwandisa ukhetho kwikholamu ekujoliswe kuyo. . I-Excel ngokukhawuleza ifaka le rekhodi yedatha kwitshathi. Kukho ukubanjwa, nangona kunjalo! Idatha ekujoliswe kuyo iboniswa njenge-bar, engenakwenzeka kakhulu.
Kungcono ukubonisa ixabiso ekujoliswe kulo kuzo zonke iinyanga ngomgca othe tyaba. Ke masilungise le nto kunye! Okokuqala, cofa kuyo nayiphi na ibar ebonisa ixabiso ekujoliswe kulo kwigrafu. Onke amaxabiso ekujoliswe kuwo aphawulwe ngezi zangqa zincinci ziluhlaza ukuze senze utshintsho ngoku.
Fumana ithebhu yoyilo lweTshathi kwaye ukhethe uhlobo lweTshintsho loTshintsho. Kodwa jonga ngoku! Ukuba sikhetha umgca apha, zombini idatha ekujoliswe kuyo kunye nentengiso iya kuboniswa njengemigca njengoko ubona kulo mboniso. Kodwa asiyifuni loo nto.
Sifuna ukudibanisa iintlobo ezimbini zegrafu, ke sikhetha iCombo apha ngezantsi. Apha sinokukhetha kuphela umgca wedatha ekujoliswe kuyo, kwaye i-Excel iya kubonisa ixabiso ekujoliswe kulo njengomgca othe tyaba. Cofa Kulungile kwaye siqhubeka.
Uncedo olukhulu lwayo yonke le nto kukuba yonke inkqubo inamandla, okuthetha ukuba ufuna ukutshintsha ixabiso ukusuka kuma-60 kuye kuma-80, i-Excel iyakuhlaziya itafile yonke kunye nedatha eboniswe kwitshathi. Ke xa ukongeza umgca wokugqibela ngale ndlela, i-Excel iyawenza wonke umsebenzi ukugcina itshathi yonke ihlaziyiwe. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngezinye izinto ezinomdla kumzobo, funda ukuba ungazongeza njani kwaye uzifomathile, jonga ezinye iitutorials zamanqaku ezivela kwi-EasyClick Academy.
Amakhonkco kwezi zifundo anokufumaneka kwinkcazo engezantsi. Ukuba ufumene olu qeqesho luncedo, nceda usinike i-Like kwaye ujonge ezinye izifundo ze-EasyClick Academy. Funda ukusebenzisa i-Excel ngokukhawuleza nangokulula! Ukuba eli lixesha lakho lokuqala kwi-EasyClick? Sijonge ukukwamkela kuluntu lwethu oluku-intanethi.
Cofa kwiBhalisa iqhosha kwaye ujoyine i-EasyClickers! Enkosi ngokubukela kwaye sikubone kwinqaku elilandelayo!
Yintoni itshathi yendlela yesilayidi?
Inkqubo ye-umtyibilizi, ubukhulu becala, ngumxube ochazwe kwangaphambili wolwabiwo lwee-asethi ze-TDF ekuhambeni kwexesha. ... Kwaye ngokuhamba kwexesha, njengoko lo mzuzu uqala ukutshona kwelanga, umxube weeasethi zawo kufuneka ujike uzinze ngakumbi.Glide iindlelaziboniswa kumacala amabini alula X, Yitshathi. I-axis ye-x, okanye ulungelelwaniso oluthe tyaba, imele ixesha leHorizon.
Bahlobo abathandekayo kunye nabalandeli, umbuzo wanamhlanje ubaluleke kakhulu kuJoe kwaye isebenza njani i-ILS? Ngoku kuye kwafuneka ndenze iziqendu ezithathu ezahlukileyo kuqala ukugqiba isihloko sonke, ke eli candelo lelinye eligubungela ukuqonda okusisiseko kwendlela esekwe ngayo i-ILS. Yinxalenye yesiqendu sesibini sendlela yokubhabha i-ILS. Okokugqibela, kukho iindidi ezahlukeneyo ze-ILS, ukunciphisa kunye neenkqubo zokukhanyisa.
Ke masiqale ngesi sihloko sibaluleke kangaka. Eli nqaku libonelelwa nguwe yiSquarespace. I-ILS imele ntoni? I 'I' yesixhobo, i 'L' yokumisa kunye ne 'S' yenkqubo, ukuze inkqubo yokumisa isixhobo yinkqubo yokuhamba ngonomathotholo esekwe emhlabeni enika abaqhubi beenqwelo moya ngakwicala elingasemva nelithe nkqo kumgaqo weenqwelo moya xa usondela IMC.
Ukubhabha indlela ye-ILS, inqwelomoya kufuneka ixhotyiswe ngesamkeli esifanelekileyo se-ILS ukubonisa kunye nokuguqula imiqondiso efunyenweyo kwizixhobo zeepokethi. Uya kudinga itshathi yendlela ye-ILS efunekayo kunye nedatha ebalulekileyo enje ngekhosi ye-ILS ye-ILS kunye ne-glide path angle, ubuncinci bokuphakama okuchaziweyo okanye ukuphakama kuxhomekeke kudidi lwe-ILS kwaye, okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, inkqubo yokujikeleza ngoku Ok Makhe sithethe ngakumbi ngenkqubo esekwe emhlabeni ngoku ikhona inkqubo yokuhambisa ii-eriyali kumaza afanelekileyo, into ebizwa ngokuba yi-localizer eriyali ihlala ibekwe ngaphaya komgaqo wendlela kwaye ubukhulu becala yenziwe zii-eriyali zesalathiso. Bathumela imiqondiso kanomathotholo kwi-axis ethe tye yomgaqo weenqwelo-moya.
Makhe sijonge lo mfanekiso apha. I-eriyali yendawo ihambisa ii-lobes frequency ezilungelelaniswe ukuya kwi-90 hertz kwicala lasekhohlo lendlela esembindini kunye ne-150 hetz ngasekunene. Ukuze ufumane ukuqonda okungcono nge-eriyali yendawo, cinga ukuba iklabhu nganye iya kuba sisibane esikhulu sokukhanya, ngoku icala lama-90 likaHertz liya kuba kukukhanya okutyheli kwaye icala le-150 likaHertz liya kuba kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Masithi umncinci ngasekunene kwendawo yokubaleka ukuze ukukhanya okubonileyo ikakhulu kuluhlaza okwesibhakabhaka. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ubhabhe ngaphezulu uye ngasekhohlo, apho ukukhanya kwemibala kuhamba kunye nokuvelisa ukukhanya okuluhlaza. ekunene kumgca osembindini.
Ngokucacileyo akukho kukhanya ngaphandle kwePAPI, kodwa lelo libali elahlukileyo ngokupheleleyo. Kodwa uya kufumana ukuqonda malunga nokutolika isiginali ye-ILS eguqulweyo kwi-ADI yakho, i-HSI okanye i-PFD. Endaweni yemibala, ngoku unayo le dayimani ebonisa isikhundla sakho ngokuhambelana nomgaqo ophakathi weenqwelo-moya.
Ke ukuba idayimane ibisekunene okanye, masithi, umzila weenqwelo-moya usekhohlo kuwo kwaye kuya kufuneka ulungise ikhosi yakho ngasekunene ukuze ujoyine i-localizer kunye ne-vice versa, kubalulekile ukuba wazi ukuba i-localizer nayo yenza into ebizwa ngokuba ngumsebenzi we-ILS ikhowudi yokuchonga, ke yintoni elungileyo ngoku, kuba uluhlu lwamaxesha e-ILS lincinci, ungathatha isantya esingalunganga se-ILS kwisikhululo seenqwelomoya esikufutshane. ILS nganye ithumela ikhowudi yayo yeMorse. Umzekelo, ikhowudi yokuchonga ye-ILS ye-runway 0 4 kwisikhululo seenqwelomoya iJohn F Kennedy ngasekunene yi-India Juliet, Foxtrot kilo. Isixhobo sokufumana i-ILS, okanye ufuna ukumamela ikhowudi yeMorse kwaye uyithelekise nohlobo lwenqwelo moya oyiyo ukubhabha kwitshathi yendlela yakho ye-ILS? Kusafuneka usete frequency ye-ILS kwaye uve ikhowudi yeMorse, kulungile, enkosi! ngoku senze isikhokelo esecaleni komgaqo weenqwelo moya.
Masithethe nge-axis ethe nkqo. Ngoku le axis ichazwa njengethambeka lomtyibilizi, ngoku i-eriyali yomthambeka ofanayo iyafana ne-eriyali yendawo, ithumela kuphela imiqondiso kwi-axis ethe nkqo kwicala lendlela yakho yeenqwelo-moya kwaye ilungelelaniswe ngokuthe ngqo kumhlaba wokubamba. Ngoku khawucinge nje ngomzekelo wesibane esikhanyayo endikhe ndawukhankanya umzuzu odlulileyo, uyasebenza, kuphela kwi-90 yeedigri ye-engile kwimbonakalo yokubona.
Ngaba i-gvgmall esemthethweni
Kwiimeko ezininzi, i-engile yendlela ye-glide kumgaqo weenqwelo moya ziidigri ezintathu. Le ngekona inqanaba elifanelekileyo lokuma ngokuhambelana nesantya sendlela kwaye ayinzulu ngokwaneleyo ukugcina ukunciphisa isantya sakho ngokwandisa ii-slats, i-flaps, kunye nezixhobo zokufika, kodwa ngakumbi malunga nesiqendu esilandelayo. Ke enye idayimane iya kuvela kwisixhobo sakho, ibonise indawo okuyo malunga nomgaqo we-glide.
Ukuba idayimani ngoku ingaphezulu kweli ziko, ndiza kukunika isibonakaliso sokuba ungaphantsi kwendlela ye-glide ngoko ke kuya kufuneka ukuba unciphise isantya esime nkqo okanye kwinqanaba lokuphinda ubambe umgaqo we-glide ukuba idayimani ingaphantsi kombindi wesixhobo uphakame kakhulu. Hlaziya isantya esime nkqo kwakhona ukuze ubuyele kumgaqo we-glide, oko kuvakala kulula ngoku, kodwa qaphela ukuba njengoko uqhubeka ukuthambeka uzuza isantya, njengoko usenza inqanaba lokucotha. Ke wonke ngumbuzo wokuthambeka kunye nokusebenza kwaye kwangaxeshanye ukwandiswa kweeslats kunye nokunxibelelana kwe-ATC ngobuqili kukho imigama emtyibilizi exhaphake kakhulu ngenxa yeentaba okanye inkululeko kwimiqobo.
Nciphisa amaxabiso ukuba uqaphele. Umzekelo, i-runway 2-4 eNaples yaziwa ngokungxama kunendlela yesiqhelo ye-ILS. Kwaye apha kuza ukhuphiswano oluncinci: sesiphi isikhululo seenqwelomoya esineyona ndlela iphezulu yokupapashwa kwe-Eilis emhlabeni? impendulo yokuqala echanekileyo iya kuphawulwa! Kulungile, ngoku sichonge ezona zinto ziphambili ze-ILS ezibonelela ngesikhokelo esime nkqo nesimi nkqo kwindlela yokubaleka, kodwa uyazi njani ukuba umgama ongakanani kumgaqo wokubaleka ubalulekile kulawulo lwakho lwesantya.
Masithi uku-2,500 iinyawo kwaye uyazi ukuba indlela ye-glide ithambekele kumgaqo weenqwelo moya. Okanye unokukhawuleza uthathe ikharityhuleyitha yakho kwaye ubale yonke into kwimozulu embi kwaye ngelixa ujonge izixhobo zakho iinkqubo ze-ILS zinamanqaku amathathu okuphawula, umakishi wangaphandle, umakishi ophakathi kunye nomakishi wangaphakathi. Ke xa ubhabha ngaphezulu kwesiphawuli sangaphandle, ukukhanya kancinci okuluhlaza okwesibhakabhaka kuya kuqala ukubengezela kwizixhobo zakho kwaye ikhowudi ye-beep iyahambelana nayo.
Umsebenzi we-runtimebroker.exe ukhutshiwe
Thelekisa loo nto kwikhadi lakho kwaye uyazi ukuba kulungile. Ndiwela uphawu lwangaphandle. Kuya kufuneka ubekho kobo bude kumgama ochaziweyo, isiphawuli sangaphandle kunye nesiphawuli esiphakathi sisekhona.
Kodwa andikhe ndive kumakisha kwangaphakathi ixesha elide. Ziyi-eriyali yesithathu emayifakwe kwi-range ye-DME ekunika uluhlu lwee-angled kumgaqo weenqwelo moya, okwenza ukuba umgama wakho ubekwe lula ngoku. Nangona kunjalo, inqwelomoya yakho kufuneka ixhotyiswe ngesamkeli esifanelekileyo seDME kunye nesixhobo sokuseta ikhosi.
Ukuhamba rhoqo kwe-DME kodwa nangcono zii-ILS eziza nokwakhelwa kwisibonisi se-DME ukuba unobumba D uphambi kokuchongwa kwekhowudi. Uyazi ukuba i-ILS ihanjiswa ngesikhululo senqwelomoya se-DME kwisikhululo seenqwelomoya, kodwa yonke i-ILS epapashiweyo kufuneka ihlangane nezikhokelo ze-ICAO Annex 10, ezinamaphepha alikhulu ubude? Kodwa ngokubanzi i-localizer kufuneka ifumaneke ngophawu oluchanekileyo lweemayile ezingama-25 ubuncinci ukusuka kumgaqo wokubaleka. Bamba udibanise uthabathe iidigri ezili-10 ngapha nangapha kwiimayile ezingama-27 kunye no-35 degrees.
Kwezinye izikhululo zeenqwelo moya ungasebenzisa iNdawo yokuBuya eyiNdawo okanye iBack Beam, okt.
Ungasondela kumgaqo weenqwelo moya ovela kwelinye icala, kodwa ngaphandle komboniso wendlela ye-glide. Nangona kunjalo, gcina oku engqondweni ukuba inqwelomoya yakho ayinakho ukuxhotyiswa ngesixhobo esinokutshintshela kuluntu lwasekhaya kwindlela yokubuyela umva. Ukufundwa kubuyisiwe umva kwaye umendo we-glide unokuchaneka okungcono ngokudibanisa okanye thabatha iidigri eziyi-8 kwicala ngalinye lendlela yokubaleka ngaphakathi kwe-10 yeemayile zemayile.
Ndiyathemba ukuba ulonwabele inqaku elisisiseko elivela kwi-ILS, jonga inqaku elilandelayo ngendlela yokubhabha i-ILS! Ukujongana nomoya, ukwandiswa kweeflaps kunye neegiya kunye nokunye okuninzi. Enkosi ngexesha lakho. Ungalibali ukwenza umnwe kwaye uye kwiakhawunti yam ye-Instagram.
Ikhowudi yam yokuchonga ye-ILS yi-India uJuliet Oscar Echo. Kwakhona, ungalibali ukubetha iqhosha elithi 'Bhalisa' ngezantsi ukuze ungaphoswa ziintsimbi zesaziso ezilandelayo! Kude kube yiveki ezayo! UnguKapteni Joe, njengawe ukuba ufuna ukuchukumisa umqeshi wexesha elizayo. Guqula i-resume yakho okanye i-CV yakho kwiwebhusayithi entle ebonisa ukuba ungubani.
Amashishini awadingi nje iiwebhusayithi abantu ekufuneka benazo nabo. Unokwahluka kwabanye, kwaye unokufumana amathuba amahle okwakha iwebhusayithi yakho ngeSquarespace. Ilula kwaye ijongeka intle.
Ngoku ndihlaziya iwebhusayithi yam ngayo! Kuyakhawuleza ukuseta kwaye akukho khowudi ifunekayo, ke fumana i-10% kwisilingo sasimahla ku- squarespace.com/captainjoe! Ewe ewe!
Uyenza njani indlela yomtyibilizi?
Sebenzisa iGlide Indlelaisixhobo, kufuneka uqaleyenza iNdlela yeGlide. Ukwenza njalo, tyikitya ngumcebisi, emva koko uqhubeke kwicandelo lezicwangciso kwiStream. Kubalulekile ukuba uqaphele ukubaGlide IindlelaZibaluleke kakhulu kubacebisi kwaye azabelwanga ngazo kwifemu. Emva koko, khetha ifayile ye-Glide Iindlelacofa icandelo Yongeza eNtshaIndlela yendlela.31 Mar. Ngo-2016
Uthethathethwano lwe-Canal kunye nokulungiswa kwendlela ye-glide yinxalenye yokuqala yokulungiswa kweengcambu kwaye yeyona nto ibaluleke kakhulu. Ndihlala ndichitha ixesha elininzi kule nxalenye yenkqubo yokuba nemijelo enelungelo elilodwa lomenzi ngaphambi kokulungiselela umgaqo we-glide xa kuthelekiswa nolungiselelo lwengcambu yenyani ukuze ndivumele ukuba ndibonise inyathelo lamanyathelo ngamanyathelo esi sigaba sonyango. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, patency yomjelo linyathelo lokuqala, ndisebenzisa indibaniselwano yeefayile ze-08 C + kunye ne-08 K ukunyanga imijelo ukuya kuthi ga patency.
sebenzisa ukwabelana ngewizard
Ezinye iimeko zilula kwaye ezinye zinzima kakhulu, ndicinga ukuba ukungakwazi ukusebenza ubude obugcweleyo sisizathu sokuba sibone iinkqubo ezingalungiswanga kakuhle kunye nezifumanekayo. Kweli nqaku iklip uyabona ukuba sendifikile kwi-patency ngoku. Emva koko, ndiya kwenza ubude bam bokusebenza nge-apex locator ye-elektroniki.
Ngamanye amaxesha, ukungakwazi ukwenza ithoni kwingxoxo yenkqubo yengcambu, ngakumbi inkqubo yeengcambu, umzekelo MB2 canalin maxi llary molars, kungabangelwa kukuthintelwa kwe-dentin kuvulo lweengcambu, kuthintela ifayile ukuba ingene ngokufikelela ngokuthe ngqo kwindalo iphela. inkqubo. Esi sixhobo kufuneka sisetyenziswe ekuqhubeni i-brushing nge-stroke yangemva kwaye akufuneki sityhalelwe kwinkqubo yeengcambu. Ukubukhali okungama-9-11% kwesi sixhobo kungakhokelela ekuvaleni kwecone kunye nokwaphuka ukuba kusetyenziswe ngokuqhubekekayo ngesindululo esingalunganga.
Inyathelo lokulungiselela umendo we-glide liza kuba kukudala umendo omncinci wokuphinda uvelise. Njengoko ubona kwesi silayidi, ndiyathanda ukophula amanyathelo omzimba abandakanyekayo ekulungiseleleni indlela ye-glide kwindlela encinci kunye ne-macro glide. Kuqala, makhe sixoxe ngendlela encinci ye-glide.
Isikhokelo esivelisayo esincinci sinokuveliswa kuphela ngezixhobo zesandla: izixhobo zokuphela ezincinci ezinje ngefayile ye-08 okanye ye-10 K, kuxhomekeke kubungakanani bokuqala bomjelo. Kodwa ingxaki kukuba azizalanga. Makhe ndikubonise lo mzekelo.
Kule nqaku, sinobungakanani be-08 K-fayile enokuthi ihambe ngeengcambu ze-patency. Nangona kunjalo, xa sikhupha ifayile emseleni kwaye sizama ukutyhala sibuyele kubude obusebenzayo, ixhomeke ndaweni ithile eludongeni lomsele. Oku kuthetha ukuba kukho indlela yomtyibilizi, kodwa ayinakuveliswa kwakhona.
Lo mzobo ubonakalisa olu hlobo lwemijelo enendlela emtyibilizi, kodwa ayizaleki kwakhona kwaye ndiyathanda ukubiza ezi ndlela ze-glide ezimile ngendlela engaqhelekanga. Ukuba sinethamsanqa okanye indlela ye-glide iqhelekile, kunokwenzeka ukuzisa ubungakanani be-08 okanye i-10 K yefayile kubude obusebenzayo ngokulula. Umceli mngeni uvela xa sirhoxisa ifayile njengoko sibonile kwinqaku.
Iklip kwinqaku elidlulileyo emva koko lixhoma ezinye izitenxo eludongeni lomsele. Ngolu hlobo lwemijelo enendlela engahambelaniyo ye-glide, kuyacetyiswa ukuthatha ifayile ye-08 okanye ye-10 K ngokusebenza ngokupheleleyo kwaye emva koko kunye nezincinci ezincinci kufuneka siyenze ifayile ikhulule kwi-1 millimeter, ukuya kuthi ga kwi-2 millimitha, 3 millimeters kunye neemilimitha ezi-4 kubude bokusebenza ngokwendlela echazwe nguJohn West. Inyathelo lesithathu ekulungiseleleni umgaqo we-glide kukuqinisekisa ukuba siyile nyani indlela yokuzala kwakhona esetyenziswa zezi zixhobo zincinci zezandla.
Ukuqinisekisa eli nyathelo, kuyacetyiswa ukuba uzise ifayile eyi-10 K kubude obupheleleyo bokusebenza okanye kwi-patency, uyikhuphe malunga ne-4-5 yeemilimitha kubude bokusebenza kwaye uyityhalele emva kubude bokusebenza ngoxinzelelo olukhanyayo ngaphandle kwendlela Ukuthanda izinto kuthintelwe. Inkqubo yokuqinisekisa iqinisekisa ukudalwa kwendlela yokuzala kwakhona ye-micro-glide. Ngoku siza kwinqanaba lokugqibela kulungiselelo lwendlela ye-glide, oko kukuthi ukwandisa umendo omncinci ojikelezayo ngezixhobo zendlela ezijikelezayo, umzekelo iPathFiles® okanye isixhobo esinye seProGlider®.
Oku kudala indlela egudileyo nangaphezulu, nokwenza ingcambu ikulungele ukufumana nasiphi na isixhobo sokulungiselela ingcambu ngokhuseleko kunye nembeko yeengcambu zomzimba.
Usebenzisa nini isicwangciso sendlela yokuhamba?
Iindlela zeGlide zihlala zisetyenziselwa ukucwangcisa umhlalaphantsi. Indlela yomtyibilizi sisicwangciso solawulo lwexesha elide kutyalo-mali olwenzelwe ukukhokela olo tyalo-mali ekukhuleni komhla othile.
Ngaba kukho umahluko obonakalayo phakathi kweendlela zababoneleli beglasi?
Umahluko obonakalayo phakathi kweendlela zeglide zababoneleli ngokubanzi ugxekwa. Nangona kunjalo, i-fiduciaries inokukufumanisa kuyakha ngakumbi ukujonga lo mahluko njengethuba lokukhetha eyona ndlela iglide ngokufanelekileyo kwisiseko sabo sokuthatha inxaxheba. Ngokwendalo, umahluko ekucingelweni unegalelo elikhulu kubume bendlela ye-glide.
Uqala nini kumhla ekujoliswe kuwo?
Ngokusekwe kwidatha efunyenwe kwi-Morningstar Inc., Itshati yoku-1 ibonisa umahluko phakathi kwendlela yomhla ekujoliswe kuwo yabanikezeli be-glide. Kubonakala kukho ukuvumelana ngokubanzi phakathi kwabanikezeli bemihla ekujoliswe kuyo malunga nolwabiwo olufanelekileyo lwe-equity ekuqaleni kwendlela ye-glide (okt, kuphela i-20% yokusasazeka).
Ndingena phi kumendo 1 kwi-Excel?
Umzekelo, iNdlela yoku-1 inePlase yokuThenga, uKhetha uyilo, ukuThengwa kweNkuni, kunye nokuHlanganisa imisebenzi yeShedi. Ke ngoko, uya kufaka 1 kwiseli B8, C8, D8, kunye noJ8. Kuyo yonke imisebenzi engekho kwiNdlela yoku-1, faka u-0. Ke iiseli E8, F8, G8, H8, kunye no-I8 ziya kuba no-0.Bhekisa kumfanekiso ongezantsi malunga nedatha efakelweyo ngokweDrafti yangaphambili.